Adda Bilisummaa Oromoo: ''Waraana dhaabne malee hin hiikkachiisne'' - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, JONATHAN ALPEYRIE
Addi Bilisummaa Oromoo waamicha marii karaa nagaa mootummaa Itoophiyaarraa dhiyaateef haala mijeessuuf jecha tarkaanfii waraanaa yeroof akka dhaabe Dubbi Himaan Addichaa Obbo Toleeraa Adabaa ibsaniiru.
Ibsi qaama olaanaa dhaabichaa murtee shaneetiin dabarfame kan jedhan Obbo Toleeraan akeeki murtichaa marii yeroo darbe Eertiraatti Hayyu Dureen ABO obbo Daawud Ibsaa fi Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad mari'atan fiixaan baasuuf jedhan.
''Marii araaraa sana fuulduratti tarkaanfachiisuuf Waraanni Bilisummaa Oromoo (WBO) waan isa weeraruuf itti dhufurraa kan hafe yeroo waraana akka dhaabu labsineerra. Kun gama keenyaan marii araaraaf fedhii qabaachuu keenya agarsiisa.'' jedhan Obbo Toleeraan.
Kanaan ABOn laalaa durii waan qabnuuf dhimma waraana hiikkachiisuu irratti walii hin gallu ejjennoo jedhu qabatee yoona ga'eera, mootummaa waliin walwaraanaa turretti harka duwwaa itti hin adeemnu jechaa ture, ammawoo wayita murtee kanarra ga'u ejjennoosaa sana maaltu jijjiirsise?
''Nuti hidhannoo hiikkachiisna hin jenne, yeroof tarkaanfii waraanaa fudhachuurraa of qusanna jenne. Tarkaanfii kanas waan hunda dhiisnee kan fudhanneef fedhii marii araaraa sanaaf qabnurratti. Waan hunda caalaa marii nagaa waan barbaadneef'' jedhan.
WBOn eessatti tarkaanfii waraanaa fudhachaa jira? Tarkaanfii waraanaa isa kamirraa akka of qusatu murteen darbe? gaaffii jedhus dhiyeessineerraaf.
'Waraanni Bilisummaa Oromoo kutaa Oromiyaa hunda keessa ni jira, baayyinni isaa wal haa caaluyyuu malee. Kanaafuu bakka jiru hundatti lola akka hin seenne labsineerra'' jedhan.
Dhaabni ABO bakka baayyeetti walqoodeera, dabalataanis maqaa WABOtiin qaamoleen Oromiyaa keessa socho'anii haleellaa uuman akka jiran dhaabni keessanis ibsaa ture. Kunis, isaan irratti dhiibbaa akka uumu amana.
ABO'n biyya galuuf haal-duree attamii kaa'e?
''Abbaan koo ijji jaamee, haati koos dulloomteen argadheen''
''Kanneen Maqaa ABO fi waraana bilisummaa oromootiin socho'aniif ummata Oromoo waliin taanee akka bakka jiranitti dhaabbatan ni hojjenna. Kanaan duras ummata waliin ta'uun namoota maqaa waraana bilisummaa oromootiin socho'an saaxilleerra. Kanaaf ammas ummataa fi waraana bilisummaa Oromootu to'ata,'' jedhan.
Tarkaanfii waraana dhaabuu akka haalduree marii nageenyaatti kan eeran Obbo Toleeraan marii araaraafis jila mootummaa Itoophiyaarraa eegaa jirra malee nuti qophiidha jedhan.
Adda Bilisummaa Oromoo: ''Rakkoo nageenyaa Lixa Oromiyaa harka keessaa hinqabnu''
''Abbaan koo ijji jaamee, haati koos dulloomteetun argadheen''
Moodelii sababa amantii hojii faashinii dhiiste, Haliimaa Adan
Saayintistiin niwukilaraa gameessi Iraan ajjeefame
Naannoo jiranitti dhaddachi yeroo akka hundaa’uf Obbo Jawaar fa'i gaafatan